महँगियो निर्माण क्षेत्र : एक करोडमा बन्ने घर अहिले कतिमा बन्ला ?
काठमाडौ । नेपालको निर्माण क्षेत्र महँगिदै गएको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य र मजदूरको ज्याला बढ्दै गएपछि निर्माण महँगो भएको हो । सरकारले संकलन गरेको प्रारम्भिक मूल्य सूचकांकअनुसार आर्थिक वर्ष..
करीब १० अर्ब लागतमा कालङ्गा जलविद्युत् आयोजनाको निमार्ण शुरू, ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
बझाङ । निजी क्षेत्रको लगानीमा ६५ मेगावाट क्षमताको कालङ्गा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य शुरू भएको छ । बझाङको बुङ्गल क्षेत्रमा पर्ने कालङ्गा गाडमा निर्माण हुने कालङ्गा जलविद्युत् आयोजनाको मङ्गलवार एक कार्यक्रमबीच..
चितवन । वर्षातको समयअघि नै नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको भित्तो काट्ने काम सम्पन्न गर्न दैनिक सवारी आवागमन छ घन्टा रोकिने भएको छ। हाल बिहान १०:३० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म सवारी रोकेर काम..
सौर्य सडक बत्तीको बोलपत्रमा अनियमितता, कमिशनको निउँमा रद्द भयो जडान प्रक्रिया
चरिकोट । दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकामा सौर्य सडक बत्ती जडान गर्ने बोलपत्र आह्वानमा अनियमितता भएको सार्वजनिक भएको छ । सौर्य सडक बत्ती जडान गर्ने भन्दै बोलपत्र आह्वानका लागि भीमेश्वर नगरपालिकाले गत..
इन्द्रावतीलाई मेलम्ची दोस्रो, तेस्रोबाट असर, विद्युत उत्पादनमा समस्या हुने
चौतारा । सिन्धुपाल्चोकको पश्चिमी भेगको ज्यामिरेमा सञ्चालित ७ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत् आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट प्रभावित हुने भएको छ । हेलम्बुको अम्बाथान मुहानबाट दैनिक १७ करोड लिटर..
काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समेत जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय जल तथा मौसम सप्ताहको आज ललितपुरमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले मुलुकको कर्मचारी..
देशको कुल बजेटको ६० प्रतिशत गाँउपालिका र नगरपालिकालाई दिने तयारी
काठमाडौं । कुल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहलाई दिने सरकारी तयारी भइरहेको छ । हालै स्थापना भएका ७४४ स्थानीय तहलाई नै सम्पूर्ण रुपमा खर्च गर्न पाउने गरी बजेटको..
​नवलपरासीमा खुल्दैछ चिनियाँ साझेदारीमा ५२ अर्बको सिमेन्ट कारखाना
परासी । चिनियाँ र नेपाली लगानीकर्ताले रु ५२ अर्ब लगानीमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका छन् । बेणीमनीपुरमा निर्माण हुँदै गरेको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि भौतिक पूर्वाधार..
काठमाडौं । मुलुकमा सङ्घीयता लागू भएपछि विकास निर्माणका योजनालाई समन्वयात्मकरुपमा अगाडि बढाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप–पीपीपी)को नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मङ्गलबार आयोजना..
मेलम्चीको पानी चक्रपथ बाहिर पनि वितरण हुने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले मेलम्चीको पानी चक्रपथभित्र तथा बाहिर पनि वितरण गर्ने बताएको छ । लिमिटेडको पाँचौ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन समारोहमा महाप्रबन्धक डा महेशप्रसाद भट्टराईले सो जानकारी दिएका हुन्..
माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ सम्पन्न
रसुवा। रसुवा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा निर्माणाधीन माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको २० महिनाभित्र उत्पादन सुरु हुने भएको छ । समुद्री सतहदेखि दुई हजार ३५० मिटर उचाइको चिलिमे गाविसअन्तर्गत तिलोचेबगरमा बाँध बाधी सोही..
नेपालमा ८ खर्ब ३० अर्ब लगानी गर्ने चिनियाँ घोषणा, भारतको ३१ अर्ब मात्रै
काठमाडौं । काठमाडौंमा सकिएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा चीनबाट मात्रै ८ खर्ब ३० अर्बको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । लगानी सम्मेलनमा अन्य देशका लगानीकर्ताको प्रतिवद्धतालाई उछिन्दै चीनबाट सबैभन्दा धेरै लगानीको घोषणा..
​लगानी सम्मेलनमा ठूलो बिदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता
काठमाडौं । २५ बर्षपछि काठमाडौमा आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा राजनीतिक नेताहरुले देशमा ठूला खाले बिदेशी लगानी भित्र्याएर चाँडै देश बिकास गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले लगानी ल्याउने वातावरण..
अनलाइन मार्फत एक महिनामा जलविद्युतमा ७ अर्ब लगानी प्रतिवद्धता
काठमाडौं । जलविद्युतमा लगानी गर्न एक महिनामा ७ अर्ब रुपैयाँको प्रतिवद्धता आएको छ। सरकारले अनलाइन मार्फत जलविद्युतमा लगानी प्रतिवद्धता संकलन गर्न थालेको एक महिनामा सर्वसाधारणले ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता..
काठमाडौं । एशियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना २५ जिल्लामा सञ्चालन भएको छ । खानेपानी तथा ढल निकास विभागले एशियाली विकास बैङ्कको एक अर्ब २५ करोड ऋणमा..
​डेनिस राजकुमारद्धारा लघु जलविद्युत् आयोजनाको अवलोकन
काभ्रे । डेनमार्कका राजकुमार योकिम होल्गर बाल्दिमार क्रिस्चियनले शनिबार काभ्रेपलाञ्चोकको भीमखोरी गाविसस्थित करमडाँडा लघु जलविद्युत् आयोजनाको अवलोकन गरेका छन् । नेपालको अनौपचारिक भ्रमणमा आएका उनले सो लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट सञ्चालन..
८ बैङ्कको लगानी रहेको अप्पर सोलुखोलाको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न
सोलुखुम्बु । सोलुखोला जलविद्युत् आयोजनाको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । अप्पर सोलुखोला हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले निर्माण गरिरहेको २३ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण ४० प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाले जनाएको..
अन्नपूर्ण केवलकारलाई सनरार्इज र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ६६ करोड ऋण दिने
काठमाडौं । पोखरामा निर्माणाधिन अन्नपूर्ण केवलकारमा सनरार्इज बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहवित्तियकरणमा ६६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका छन्। विहिवार ऋण लगानीका लागि अन्नपूर्ण केवलकार प्रालि र बैंकबीच सम्झौंता भयो।..
माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाः प्रसारण लाइनमुनि उचित मुआब्जा दिन स्थानीयवासीको माग
काठमाडौं । काठमाडौंलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत्भार कटौतीमुक्त अभियानमा सहयोग पुर्‍याएको माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन प्रभावितले आफूहरुको माग सम्बोधन गरिदिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । लमजुङ जिल्लाका सांसद..
गोरखा । बूढीगण्डकी प्रभावितलाई डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा रकम लिन लालपुर्जा माग गरिएको छ । पहिलो चरणमा मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको गोरखाको घ्याल्चोक, भुम्लिचोक र दर्बुङ गाविसका बूढीगण्डकी प्रभावितलाई डुबान..
​६ महिनामा बजेट खर्च २६ प्रतिशत
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को ६ महिनामा सरकारले जम्मा २६ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । चालू आवको पुससम्ममा सरकारले कुल २ खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड ५१ लाख रुपैयाँमात्र..
वीरगञ्ज । रक्सौल परवानीपुर १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण पूरा भएको छ । भारतको रक्सौलदेखि परवानीपुरसम्म रहेको सो प्रसारणलाइनको टावर, तार तथा अन्य उपकरण जडानकोे अन्तिम जाँच शुरू भएको..
फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्बन्धि सुझाव प्रतिवेदन पेस, ५ वर्षभित्र आयोजना पूरा गर्न सकिने
काठमाडौं । काठमाडौं र तराई मधेश जोड्ने द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित उच्चस्तरीय समितिले सोमवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष..
‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०१७’ आजदेखि शुरु
काठमाडौँ । ‘दिगो पूर्वाधार समृद्धिको आधार’ भन्ने नारासहित आजदेखि यहाँ ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०१७’ सुरु भएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ ९सिएनआई० मुख्य आयोजक तथा नेपाल सरकार र युवा निर्माण व्यवसायी..
​१४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले मुआब्जा वितरण गर्न थाल्यो
काठमाडौँ । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गर्न थालेको छ। आयोजनाले आजदेखि मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । पहिलो दिनमा नै १७ प्रभावित घर परिवारलाई मुआब्जा वितरण..
​प्रधानमन्त्रीले गरे हेवा खोला ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन
पाँचथर । पाँचथर पावर कम्पनीद्वारा निर्मित १५ मेघावाटको परियोजना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गरेका छन् । २०६७ सालमा निर्माण सूरु गरीएको आयोजना निर्माण भइसक्दा दुई र्अब ६० करोड खर्च भएको..
​पोखरामा खानेपानी परियोजनाकालागि जापानको साढे चार अर्ब अनुदान
काठमाडौँ। जापान सरकारले पोखरामा खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना कार्यान्वयनका लागि चार अर्ब ५३ करोड ९० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्न सहमत भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज भएको कार्यक्रममा अर्थ सचिव..
सरकार र नेपाल टेलिकमले ४ अर्ब लगानीमा धरहरा बनाउने
काठमाडौं । गत वर्षको भूकम्पले भत्किएका धरहराको पुनःनिर्माण नेपाल सरकार र नेपाल टेलिकमले संयुक्त रुपमा गर्ने भएका छन् । नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता रोमन अधिकारीले धरहरा पुनःनिर्माणको प्रस्ताव पुरातत्व विभागमा लैजाने गृहकार्य..
नेपाल भारत उर्जा सचिव बैठकमा चार बुँदामा भयो सहमति
काठमाडौँ। सरकारले भारतबाट आयात भइरहेको विद्युतलाई नियमित बनाउने भएको छ । त्यसका लागि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरेर २२० केभीमा चार्ज गर्ने र थप विद्युत् आयातलाई सहज बनाइने..
पुननिर्माण कोष परिचालन खाका बनाउन समिति गठन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले पुनःनिर्माण कोष परिचालनको खाका निर्माण गर्न मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल..
Results 1098: You are at page9of 37